CeleLove, Author at CeleLove - Page 27 of 33
ထီပေါက်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ ဆိုတာ … သိချင်တဲ့ သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
January 29, 2020 CeleLove 0
ထီပေါက်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ ဆိုတာ … သိချင်တဲ့ သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ (သို့) ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ်ထိုးရပါမယ် …။ ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ […]
မျက်စိညောင်းခြင်းကို ကုသနည်းများ… ဒီနေ့ခေတ် ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကြောင့် လူတွေ အိပ်ရေးပျက်တာ ၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ အကြည့်များတာ၊ အင်တာနက် အသုံးများတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ် …။ အိပ်ရေး ပျက်တာကြောင့် မျက်လုံး ဖောင်းအစ်တာနဲ့ မျက်စိညောင်းညာ တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ညောင်းညာ ပင်ပန်း နေတဲ့ […]
ရန်ကုန်လေထု အနီရောင်အဆင့်ရှိနေ၍ လေထုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ မှနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်လေထု အနီရောင်အဆင့်ရှိနေ၍ လေထုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ မှနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန် ရန်ကုန်မြို့၏ လေထု အခြေအနေသည် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည့် အနီရောင်အ ဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေသဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်သည့် နှာခေါင်းစည်းများ အသုံးပြုသွားလာရန် Air Quality Yangon က နှိုးဆော်လိုက်သည် …။ ရန်ကုန်မြို့ လေထုအခြေ အနေကို […]
ဇနီးသည်ကို ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး သန္ဓေသားထွက်ကျတဲ့အထိ ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား…
ဇနီးသည်ကို ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး သန္ဓေသားထွက်ကျတဲ့အထိ ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား… အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမကိုကိုယ်ဝန်ပျက်တဲ့အထိ ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ခင်ပွန်သည်အကြောင်းကို သူမရဲ့social media မှာဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ် …။ အဆိုပါအသက် 36နှစ်အရွယ် ထိုင်းအမျိုးသမီးဟာ အနှိပ်ခန်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ သူမ၏လက်ရှိခင်ပွန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ သူမထက်10နှစ်ခန့်ငယ်ပြီး သူမလက်တွဲဖော်အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အတော်လေးပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီး အလုပ်မှထွက်ကာ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်အဖြစ်သာနေထိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ် […]
ချင်းမိုင်တွင် တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံး….
ချင်းမိုင်တွင် တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံး…. ထိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ ချင်းမိုင်ခရိုင်၊ မဲ့လိမ်းမြို့နယ်ထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံက လာတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည် အမျိုးသမီးတဦး ဒီကနေ့မနက်က ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားပါတယ်။ မယ့်လိမ်းမြို့နယ်၊ မဲ့လိုမ်းရပ်ကွက်ရှိ ဥယျာဉ်ဟိုတယ် (Resort) တခုမှာ တရုတ်ပြည်က လာတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည် ၁ ဦး ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားကြောင်း […]
“ဆီးပူတာတွေ၊ဆီအောင့်တာတွေ၊ ဆီးသွားရခက်တာတွေကို အကောင်းဆုံး သက်သာစေမယ့် ဆေးနည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်”
“ဆီးပူတာတွေ၊ဆီအောင့်တာတွေ၊ ဆီးသွားရခက်တာတွေကို အကောင်းဆုံး သက်သာစေမယ့် ဆေးနည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်” ဒီဆေး နည်းကို ကျေးဇူးတော်ရှင် မုံလယ် ဆရာတော်ကြီး တပည့် ကိုတိုးလေးမှ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့် မှ တဆင့် ကျွန်တော်ထပ်ဆင့် သိရခြင်းပါ ခင်ဗျာ …။ ငှက်ပျော သီး ဖီးကြမ်းတစ်လုံးကို အခွံပေါ်မှ အပေါက်ဖောက်ပါ။ […]
ထီဖွင့်ဖို့ ရက်နီးလာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ထီဖွင့်ဖို့ ရက်နီးလာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာမင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် …။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်က ကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် […]
မန္တလေး ရောက်ရှိနေသည့် ဝူဟန်မြို့သား (၇၃)ဦးကို တရုတ်အစိုးရက ညတွင်းခြင်းပဲ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် လာခေါ်သွား
မန္တလေး ရောက်ရှိနေသည့် ဝူဟန်မြို့သား (၇၃)ဦးကို တရုတ်အစိုးရက ညတွင်းခြင်းပဲ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် လာခေါ်သွား ဘုန်းနေ၊ ဇန်နဝါရီ-၂၈ မန္တလေးမြို့ ရောက်ရှိနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ဝူဟန်မြို့သူ၊မြို့သား (၇၃)ဦးကို တရုတ်အစိုးရက အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ယနေ့ည (၁၀)နာရီကျော်အချိန်တွင် လာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည် …။ တရုတ်အစိုးရ၏ အထူးလေယာဉ်သည် ယနေ့ ဇန်နဝါရီ(၂၈)ရက် […]
ဖယောင်းတိုင်းလို ကိုယ်တိုင်အလောင်ခံပြီး သားကို ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ မျက်မမြင် မိဘနှစ်ဦး(ရုပ်သံ)
ဖယောင်းတိုင်းလို ကိုယ်တိုင်အလောင်ခံပြီး သားကို ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ မျက်မမြင် မိဘနှစ်ဦး(ရုပ်သံ) အွန်လိုင်းပေါ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ မျက်မမြင် ဇနီးမောင်နှံရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ လေးစားစရာပါ …။ အခြားအဆိုတော်တွေရဲ့သီချင်းလည်း ဆိုပါတယ် …။ ချယ်ရီသင်း သီချင်းနဲ့မှ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်သွားတာ လို့ဆိုလာတဲ့ မျက်မမြင် အနုပညာသည် ဦးသန့်ဇင် နဲ့ ဒေါ်ရီရီထွန်း ဝမ်းစာအတွက်သီချင်းသီဆိုမှုနဲ့ […]
“ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ခြေကုန်လက်ပမ်းကျ ပင်ပန်းနေသော ဆရာဝန်များ”
“ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ခြေကုန်လက်ပမ်းကျ ပင်ပန်းနေသော ဆရာဝန်များ” ဝူဟန် …တရုတ်ရဲ့ တတိယမြောက်လူဦးရေ အများဆုံး မြို့တော်…၇ခု မြောက် အထင်ရှားဆုံး မြို့တော်… ကိုယ်တွေထက် အစစ အရာရာ…အဆပေါင်းများစွာ သာလွန်သော…ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စနစ်… အစွန်အဖျားဆေးရုံလေးတွေ…လေ့လာရေးသွားခဲ့ရတုန်းကတောင်…ကိုယ်တွေ…အားကျငေးမောခဲ့ရတာ… တကယ့် ကပ်ကြီးလဲ ဆိုက်ရော…တွေ့ရသမျှ မြင်ရသမျှ…အရာအားလုံးက စိတ်ပျက်ခြောက်ချားဖွယ်ရာ… သေတဲ့ဆရာဝန်က […]